भयरहित मतदानको माहौल प्रशासनले बनाउनुपर्ने जापको माग ….. गोजमुमोले अन्तिम क्षणमा पैसा र पावरको प्रयोग गर्न सक्छ – डा. हर्कबहादुर छेत्री | Kalimpong News
You are here : Kalimpong News » Local News » भयरहित मतदानको माहौल प्रशासनले बनाउनुपर्ने जापको माग ….. गोजमुमोले अन्तिम क्षणमा पैसा र पावरको प्रयोग गर्न सक्छ – डा. हर्कबहादुर छेत्री
भयरहित मतदानको माहौल प्रशासनले बनाउनुपर्ने जापको माग ….. गोजमुमोले अन्तिम क्षणमा पैसा र पावरको प्रयोग गर्न सक्छ – डा. हर्कबहादुर छेत्री
Posted by Kalimpongnews.net on April 17th, 2016 05:55 AM | Local News, North East News, Regional News, State News डी.के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, 16 अप्रेल 2016। विधानसभा चुनावलाई लिएर केन्द्र बिन्दुमा रहेको कालेबुङमा अन्तिम क्षणमा पैसा अनि पावरको प्रयोग हुनसक्ने जन आन्दोलन पार्टीले शंका व्यक्त गरेको छ। कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रमा विशेष गरेर जन आन्दोलन पार्टीको उदय पछि गोजमुमो पार्टीले आफु पराजय हुने डरले चुनावको अन्तिम क्षणमा पैसा अनि प्रयोग गर्ने सक्ने आशङ्का जाप अध्यक्ष डा. हर्कबहादुर छेत्रीले व्यक्त गरेका हुन। यसक्रममा जाप अध्यक्ष डा. हर्कबहादुर छेत्रीले कालेबुङमा गोजमुमो हारको डरले हताश बनेको अभियोग लगाउँदै प्रशासनले अन्तिम चरणमा पैसा र पावरको प्रयोग गर्नेहरूमाथि कड़ा नजर राख्नुपर्ने आह्वान गरेका छन्। ‘गोजमुमोसंग अब अर्को विकल्प छैन। यसैले उनीहरूले हाम्रो मान्छेलाई धम्काउन सक्छ। पैसा दिएर किन्न खोज्छ। यस्ता व्यक्तिहरूमाथि प्रशासनले कडा नजर राख्नुपर्नेछ’ डा छेत्रीले भने। उनले गोजमुमो पार्टीका युवा मोर्चा नेता बारूद थापा र दिपेन थापाहरूले उक्त अभियान मन्सोङ कास्योङबाट शुरू गरेको आरोप लगाउँदै खुल्ला गाड़ीमा हतियार राखेर आफ्नो विरूद्धमा गलत प्रचार गरिरहेको फेस्टुनहरू टाँस्दै हिँडेको अभियोग लगाए। चुनावको अन्तिम क्षणमा मतदाताहरूलाई किन्ने अथवा धम्काउने प्रयास गर्न सक्ने बताउँदै प्रशासनलाई सतर्कता गराएका छन्। यसक्रममा उनले कालेबुङका मोठ 261 वटा बुथलाई संवेदनशील बुथको रूपमा मानी लिएर प्रशासनले काम गर्नुपर्ने माग गरे। ‘हामीले आफ्नो काम गरिसकेका छौं। प्रत्येक बुथमा हाम्रा मान्छे छन्। यद्यपि सुरक्षा कर्मी र बुथ अफिसरहरूलाई हातमा लिनको निम्ति मोर्चाले प्रयास गर्न सक्छ। हामी उनीहरूलाई पनि सत्यको पक्षमा काम गरिदिने आह्वान गर्छौं’ डा. छेत्रीले भने। यसबाहेक मतदान केन्द्रको 200 मिटर टाड़ासम्म खाना बनाउन दिनु हुँदैन। मतदाताहरुले कसैको प्रभावबिना तटस्थ रूपमा मतदान गर्न पाउनुपर्ने जनाउँदै मोर्चाको चरित्रलाई बुझेर नै प्रशासनले सतर्कसंगले काम गर्नुपर्ने माग गरे। उनले चुनाव प्रचारको क्रममा इष्टमेन रोडमा जाँदा जुन आक्रमण गरेको थियो त्यहाँका आक्रमणकारीहरू आज पनि खुल्लेआम घुमिरहेका छन् भन्दै उनीहरूलाई प्रकाऊ गर्नपर्ने माग गरे। ‘यहाँ खुलेआम पैसा बाँड़ने काम हुँदैछ। हाम्रो मान्छेलाई धम्काउने कार्य हुँदैछ। यसतोमा जनतालाई भयरहित मतदान गर्ने माहोल प्रशासनले नै बनाउन जरूरी छ’ डा. छेत्रीले अझ भने।
अर्कोतिर जाप ब्यूरो सदस्य अनमोल प्रसादले छुट्टै राज्यको बिललाई लिएर अन्योलतामा हाल्नुको सट्टा बिल पेश गर्ने क्षमता सासदले राख्नुपर्ने माग गरे। उनले भने, हामीले सांसद र गोजमुमो अध्यक्षलाई गोर्खाल्याण्डको बिल पठाइसकेका छौं। यसैले हामी हेर्छौं, उक्त बिललाई उनिहरुले तीन महीनाभित्रमा पेश गर्नपर्छ। जनजातिको मुद्दा र गोर्खाल्याण्डको बिललाई लिएर हामी तीन महीनाको समय उनीहरूलाई दिइरहेका छौं। यसमा राज्य विधानसभाको सुझाव माग्ने भए तापनि बिल पेश गर्नको निम्ति राज्यको सहमतिको कुनै जरूरी नरहेको जनाउँदै उनले भने, यहाँ जनतालाई अल्मलाउने काम भइरहेको छ। राज्यको विरोधबीच झारखण्ड बनियो। उत्तराखण्ड बनियो। अब फेरि किन बंगाललाई देखाएर सांसदले आफ्नो कामबाट पछि हट्न खोज्दैछ ? उनले थपे, हामी चुनौति दिन्छौं। यसको निम्ति क्याबिनेटले राष्ट्रपतिको अनुमोदन मागेर बिल पेश गरोस्। गोर्खाको सपना हाम्रो सपना मात्रै भनेर गोर्खाल्याण्ड हुँदैन। यसको निम्ति काम शुरू हुनु पर्छ्। अहिलेसम्म एक सुता काम हुनसकेको छैन। यसैले जन आन्दोलन पार्टी चाहन्छ, कमसेकम यहाँबाट गोर्खाल्याण्डको काम शुरू हुनेछ। यस सम्बन्धमा सुप्रिम कोर्टले पनि राज्यको विरोधले केही नहुने जनाइसकेको छ। यसैले आफ्नो शासनकालमा भाजपाले कमसेकम यो पहल शुरू गर्नुपर्छ।
« Mamata should pass bill for Gorkhaland in state assembly, says Ahluwalia
Bengal polls second phase crucial for Left-Congress combine »